किन बसिन्छ मंगलबारको व्रत ? – Suchana Hub
किन बसिन्छ मंगलबारको व्रत ?
काठमाडौं । आज मंगलबार, आजको दिन श्रीगणेशको विशेष पूजा गरिन्छ भने उनका साथै हनुमान भगवानको पनि आज विशेष पूजा गरिन्छ । पवन पुत्र हनुमान शिवका ११ औं रू,द्र अवतार हुन् । हनुमानको जन्म:शास्त्रमा रामभक्त हनुमानको जन्म दुई तिथिमा भएको भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ, जसमा उनको पहिलो जन्मलाई भगवान शिवको अवतार भनेर मानिएको छ । हनुमानकी माता (आमा) अन्जनीले भगवान शिवको घो,र तप,स्या गरेर शिवलाई पुत्रको रूपमा प्राप्त गर्ने वर मागेका कारण यस्तो मानिन्छ।
त्यसपछि भगवान शिवले पवन देवको रूपमा आफ्नो रौ,द्र शक्तिको अंश यज्ञ कु,ण्डमा अ,र्पित गरेका थिए र त्यतिबेलै उक्त शक्ति अन्जनीको गर्भमा प्र,विष्ट भएको थियो भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यसपछि चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमाको दिन हनुमानको जन्म भएको थियो । पौराणिक कथामा उल्लेख गरिए अनुसार रा,वणको अ,न्त्यका लागि भगवान विष्णुले राम अवतार लिएका थिए । उक्त समय सबै देवताले भगवान रामलाई सहयोग गर्न अलग–अलग रूपमा अवतार लिएका थिए । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
सोही समयमा भगवान शंकर (शिव)ले पनि आफ्नो रू,द्र अवतार लिएर उनको समर्थन गरेका थिए ।मंगलबार तथा शनिबार क्रुर अर्थात पापी बारको श्रेणीमा पर्छन् । मंगलबारलाई अत्याधिक क्रुरबार मान्दै शास्त्रमा यसलाई शरीरमा रक्त सञ्चार गराउने धमनीसँग सम्बन्धित मानिएको छ । मानिसको शरीरमा हुने रातो पदार्थ मंगलसँग सम्बन्धित मानिन्छ । मंगलबारको दिन धेरै मानिसले श्री हनुमानजी को पनि व्रत बस्ने गर्दछन ।
Previous साउनमा यी सामान घर ल्याउनुहोस्, तपाइको भाग्य चम्किन्छ !
Next मंगलबारको दिन झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् यी कार्य :